Yini injongo nokubaluleka kokuthatha kukaNkulunkulu isimo somuntu eShayina ukuze asebenze ngezinsuku zokugcina? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
2018-04-08 12:53:49 56
Okwedlule： UNkulunkulu usesimweni somuntu eShayina ngezinsuku zokugcina; yini isisekelo salokhu eBhayibhelini kanye nasemazwini kaNkulunkulu?
UNkulunkulu usesimweni somuntu eShayina ngezinsuku zokugcina; yini isisekelo salokhu eBhayibhelini kanye nasemazwini kaNkulunkulu?
Best African Gospel Song 2018 "UNkulunkulu Uvele eMpumalanga Yomhlaba Ngenkazimulo"